Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyo dhab ah oo aad u wanaagsan ayaa hadda ku socda A220-300
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Technology • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Breeze Airways, waa diyaarad Mareykan ah oo xarunteedu tahay Cottonwood Heights, Utah.
Diyaaradda waxaa aasaasay David Neeleman, oo horay u aasaasay Morris Air, WestJet, JetBlue, iyo Azul Linhas Aereas.
Shirkadda Breeze Airways ayaa shaaca ka qaadday midda cusub A220-300 noolaha iyadoo xaqiijinaysa inay heshiis iibsi la gashay Airbus 20 kale oo ka mid ah diyaaradda.
Amarkan aan hore loo shaacin ee 20 wuxuu keenaa buuga wadarta guud ee Breeze 80 A220-300s, oo kii ugu horreeyey lagu bixin doono Q4 2021.
Shaqada rinjiga cusub ee diyaaradda ayaa lagu dhammaystiray xarunta Airbus 'ee Mobile, Alabama, taas oo ku dhowaad hal A220 gaarsiin doonta Breeze lixda sano iyo bar ee soo socda.
Breeze Airways, oo ah diyaarad goboleed oo Mareykan ah ayaa ka sheegtay shirkadda: “Waxaan nahay koox duulista hawada, soo dhaweynta, iyo kuwa teknolojiyadda jecel oo duulimaadka ah inay tahay mudnaanta iyo fursadda ugu weyn adduunka. Oo, waxaan aaminsanahay inay tahay inay noqoto mid la heli karo oo dhab ahaantii u wanaagsan qof walba. ”
“Wadajir, waan abuurnay Breeze Airways ™ - tiknoolajiyad cusub oo isku -dhafan oo leh naxariis. Breeze waxay bixisaa adeeg aan joogsi lahayn oo u dhexeeya waddooyinka aan la adeegsan ee ku baahsan Mareykanka oo dhan qiimaha jaban.
“Ballan -qaad aan kala go 'lahayn, ma jiro wax isbeddel ah ama khidmadaha baajinta iyo astaamaha duulimaadka ee la diyaariyey oo lagu keenay barnaamij jilicsan oo fudud, Breeze waxay fududeyneysaa in la iibsado oo si sahlan loo duulo. Ku soo dhowow Breeze, Duulimaadyo aad u wanaagsan iyo qiimo jaban Nice ”.”
Shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay duulimaadyada Airbus ka bilowdo rubuca labaad ee 2022.
Magaalooyinka Breeze Air
A220 wax -ku -oolnimada sare waxay taageeri doontaa ujeeddooyinka ganacsi ee diyaaradda cusub si ay u siiso waayo -aragnimo safar oo weyn, oo leh qiime jaban iyo dabacsanaan sare. Breeze ayaa la filayaa inay bixiso adeeg aan joogsi lahayn inta u dhaxaysa waddooyinka aan la adeegsan ee ku baahsan Maraykanka oo dhan qiimayaasha la awoodi karo.
Breeze waxay hawlaheeda duulimaadka bilowday May 2021. A220 -kan ugu horreeya waa diyaaraddii ugu horraysay ee cusub oo ay ku shaqayn doonto shirkaddu.
A220 waa ujeeddada kaliya ee diyaaradeed ee loo dhisay suuqa fadhiga 100-150 waxayna isu keentaa aerodynamics casri ah, agabyo heer sare ah iyo Pratt & Whitney jiilkeedii ugu dambeeyay PW1500G matoorrada turbofan-ga leh. Ka faa'iidaysiga farsamooyinkii ugu dambeeyay, A220 waa diyaaradda ugu xasilloon, ugu nadiifsan, uguna habboon jawi ku habboon qaybteeda.
Muujinta 50% raad raadka buuqa iyo ilaa 25% gubashada shidaalka halkii kursi marka la barbar dhigo diyaaradaha jiilkii hore, iyo sidoo kale ku dhawaad ​​50% qiiqa NOx ee ka hooseeya heerarka warshadaha, A220 waa diyaarad weyn oo loogu talagalay hawlgalada magaalooyinka.
In ka badan 170 A220s ayaa la gaarsiiyay toban hawlwadeen oo ku sugan Aasiya, Waqooyiga Ameerika, Yurub, iyo Afrika, taas oo caddaynaysa is -weydaarsiga weyn ee xubinta qoyska ee ugu dambeysay ee Airbus.